आकाश धुम्मिएर छिनछिनमा पानी परी रहेर दिक्क भएका महोत्तरीवासी आज भने एकाबिहानै जुर्मुराएका छन् । असोज लागीकन बिहानै घाम देख्न नपाएका यहाँका बासिन्दालाई आज एकाबिहानै झलमल्ल घाम लागेपछि राहत मिलेको
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने पदक सरकारले विवादित व्यक्तिलाई दिएर पदककै अपमान गरेको छ । राष्ट्रको शिर उच्च बनाउने काम गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने पदक
आजको अनुगमन : पानीका जार, ट्याङ र स्यानिटरी प्याड नष्ट
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । आज आक्वा ककनी ब्राण्डका १८ वटा जार नष्ट गरिएको छ । महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नयाँ बजार खुशिँवु क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा बिनोद किराना
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं । २०७२ सालको वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पानी भर्न सुरु भएसँगै रानीपोखरीको मुहार नै फेरिएको छ
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं कोरोना बीमासम्बन्धी पटक–पटक नियम परिवर्तन हुँदा सर्वसाधारण अन्योलमा परिरहेका बेला अब यसको कानुनी निरुपण हुने भएको छ । कोरोना बीमाको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय र बीमा
कपिल काफ्ले, काठमाडौं मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई उपचारका लागि निगरानीमा राखिने आइसोलेसन केन्द्रले राम्रो सेवा दिएकै कारण एक सातादेखि १५ दिनभित्रै बिरामी निको भएर घर फर्किनेको संख्या उच्च
भैरवको न रह्यो दृष्टि, न रह्यो सृष्टि
कृष्णउदास खनाल, हेटौंडा । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को एक घर । टीनले छाएको छ। एउटा कोठा बन्द छ अर्को कोठामा चारजना छन् । करिब पाँच बर्ष अघिससम्म
किशोर–किशोरीहरु र युवावस्थामा भर्खरै प्रवेश गरेका महिलाहरुमा स्लिम बन्ने चाहना अधिक देखिन्छ । तौल बढ्ला भन्ने चिन्ताका कारण उनीहरुमा खानपान नै छोड्ने, भोकभोकै बस्ने समस्या व्याप्त छ । के यसरी
बोझो, खदरादी र कागतीले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ । नेपालभित्र मात्र होइन नेपालबाहिर जाँदा पनि बोझो र खदरादी प्रायः साथमै हुन्छ । किनभने औषधि भनेको जुनसुकै
कोरोना संक्रमणले नेपालमा असर गर्न थालेको पनि ६ महिना हुन लाग्यो । यसपटकको भाइरल संक्रमणको महामारीले मानवजीवनलाई अनेक कोणबाट थिलथिलो बनायो । यदि पोहोर–परारको जस्तो सामान्य अवस्था भएको भए वैशाख–जेठमा
लक्ष्मण अधिकारी, ‘काठमाडौमा किन भिडभाड बढ्यो भनेको त होमडेलिभरी गर्नेहरुले पो गर्या रैछ’ भन्दै गत हप्ता काठमाडौ प्रशासन कार्यालयले घरघरमा सामान पुर्याउने करिव १ सय जना कर्मचारी
‘कतिपय स्वास्थ्यकर्मी फोन समेत अफ गरेर बस्नुभयो’
ज्योति पौडेल प्रदेश नं. ५ को लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत तथा नर्सिङ इन्चार्ज हुनुहुन्छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्जबाट २०६९ सालमा बीएस्सी नर्सिङको पढाइ पूरा गरी एक वर्ष
– प्रा. डा. प्रकाशराज रेग्मी (मुटुरोग विशेषज्ञ) मलाई धेरैले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन्– ‘कुन खानेतेल स्वास्थ्यका लागि ठीक होला ? ’ धेरै मानिस तेल, घिउ, बोसोलगायतका चिल्लो खाद्यपदार्थ र
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं । कोरोना महामारीको संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको अवधि थपिएको छ । काठमाडौंका प्राय हरेक वडा र टोलटोलमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ
‘सामाजिक बहिस्कारको पीडाले सङ्क्रमण लुकाउने अवस्था आउँछ’
काठमाडौँ । “हामी ‘सो सिल’ भई बसेका छौँ, हामीलाई हौसला दिनुको साटो कोरोना सङ्क्रमितको घर भन्ने फ्लेक्स व्यानरसहित एक झुण्ड समाजसेवी मेरो घर बाहिर आएको देख्दा म अच्चम्मित भएको छु”